Dendrite, ihe nkesa nkwukọrịta na ntinye nke protocol Matrix | Site na Linux
Dendrite bụ ihe nkesa na nkwukọrịta nke ahụ bụ mepụtara site na otu Matrix a na-edobe ya dị ka mmejuputa nke ọgbọ nke abụọ nke ihe nkesa Matrix.
N'adịghị ka ihe nkesa akwụkwọ Synapse edere na Python, a na-emepụta koodu Dendrite na Go. A na-ekesa mmejuputa iwu abụọ n'okpuru ikikere Apache 2.0.
Dịka akụkụ nke ọrụ Ruma, a na-emepe ụdị dị iche iche nke ihe nkesa Matrix na asụsụ Rust, nke a na-ekesa n'okpuru ikike MIT.
Ihe nkesa ọhụrụ ahụ Aims nweta elu arụmọrụ, pụrụ ịdabere na scalability.
Dendrite dị n'ihu Synapse maka usoro arụmọrụ, ọ na-achọ obere ebe nchekwa iji rụọ ọrụ ma nwee ike ịba ụba site na ịkwado ibu gafee ọtụtụ ọnụ.
Dendrite ije Na-akwado nhazi ọkwa na-adabere na nkewa nke ndị na-achịkwa n'ụdị microservices, ebe ihe atụ ọ bụla nke microservice nwere tebụl nke ya na ọdụ data.
Onye na-ebu ibu bu ọrụ maka izipu oku na microservices. A na-eji eriri (aga na-eme ihe) iji yie arụmọrụ na koodu ahụ, nke na-enye ohere ka ejiri akụ CPU niile na-enweghị ikewa ya na usoro dị iche iche.
Dendrite na-akwado ọrụ n'ụdị abụọ: monolithic na multi-components polylith (mkpụrụ osisi).
Na ọnọdụ monolithic, Ejikọtara microservices niile na faịlụ a na-arụ ọrụ, na-aga n'ihu na usoro, ma na-emekọrịta ihe ọ bụla.
Na otutu ihe mejuputara (ụyọkọ), microservices nwere ike ịmalite iche iche, ọbụlagodi na iche iche na ọnụ dị iche iche. Mmekọrịta akụrụngwa na ọnọdụ multicomponent rụrụ site na iji API HTTP dị n'ime ya na ikpo okwu Apache Kafka.
A na-eme mmepe ahụ na-adabere na nkọwa nke usoro Matrix na iji ule abụọ: usoro nyocha sytest na Synapse na ụlọ ọrụ mgbakwunye ọhụrụ.
Na ọkwa mmepe ugbu a, Dendrite gafere 56% nke ule nke API sava nke ndị ahịa yana 77% nke ule API gọọmentị, ebe a na-eme atụmatụ mkpuchi arụmọrụ n'ezie na 70% maka API sava ahịa yana 95% maka API gọọmentị.
Beta beta na-egosi na Dendrite dị njikere maka mbugharị mbụ na ntughari gaa na mmepe na weputara ohuru mgbe nile. N'etiti mbipụta, a ga-emelite atụmatụ nchekwa data ugbu a (n'adịghị ka ịwụnye chunks site na nchekwa ahụ, mgbe emelitere, ọdịnaya nke nchekwa data agaghị efu).
Mgbanwe ndị na-emebi ndakọrịta azụ, gbanwee usoro nchekwa data, ma ọ bụ chọọ ngbanwe nhazi ga-enye naanị na nnukwu nsụgharị.
Maka oge, a na-atụ aro ka ị jiri Dendrite na usoro monolithic yana PostgreSQL DBMS iji mepụta obere sava ụlọ na P2P ọnụ. Iji SQLite akwadobeghị ya n'ihi nsogbu edozighi ya na ijizi arụmọrụ arụmọrụ.
Atụmatụ adịghị etinyere na Dendrite gụnye: nkwupụta ozi, ibe edokọbara, ọkwa ntanye, OpenID, njikọ email, nyocha ihe nkesa, ndekọ aha njirimara, onye ọrụ eleghara ndepụta, okike nke otu na obodo, nyocha nke ọnụnọ onye ọrụ na ntanetị, ntinye ndị ọbịa, mmekọrịta na netwọkụ ndị ọzọ.
Ntọala ọrụ maka arụmọrụ nke ụlọ nkata (okike, akwụkwọ ịkpọ oku, iwu nyocha), ụzọ gọọmentị nke ndị sonyere na ime ụlọ, mmekọrịta nke ihe omume mgbe ịlaghachitere na offline, akaụntụ, profaịlụ, akara ngosi, nbudata na bulite faịlụ edezi (Media API) dị maka iji ozi, ACL, akara na ngwa nzochi na njedebe na ndepụta aha.
Cheta nke ahụ ikpo okwu iji hazie Matrix nkwukọrịta na-eji HTTPS + JSON dị ka ụgbọ njem nwere ikike iji WebSockets ma ọ bụ usoro nkwekọrịta dabere na CoAP + Noise. E guzobere usoro a dị ka obodo nke sava nwere ike ịmekọrịta ibe ha ma jikọtara ya na netwọkụ dịkarịsịrị anya.
A na-emegharị ozi n'ofe sava niile nke ejikọtara ndị na-ezisa ozi. A na-agbasa ozi n'etiti sava n'ụzọ dịka otu esi agbasa n'etiti nnabata Git.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Dendrite, ihe nkesa nkwukọrịta na ntinye nke protocol Matrix